ခရစ်တော်၏ ၀ န်ကြီးဌာနများသို့မက္ကာ - ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမွတ်စလင်များအား the ၀ ံဂေလိတရားဝေငှခြင်း
ဘုတ်အဖွဲ့ & ဝန်ထမ်းများ
ဘုရားသခင်သည်ဤလောကကို ချစ်၍ မိမိ၏တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည် ဖြစ်၍၊
ယောဟနျသ 3: 16
ဆော်ဒီအာရေဗျသဲကန္တာရတွင်အသက်လေးနှစ်အရွယ်၌ဖခင်တစ် ဦး အားစွန့်ခွာထွက်ခွာစေခဲ့သူဖြစ်ပြီးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်တွင်အနည်းဆုံးအမှားကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းအတွက်အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းမတိုင်မီရိုက်နှက်ခြင်း၊ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ယေရှုထံအိပ်မက်တွင်ရောက်ရှိခြင်း၊ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းနှင့်သူ၏ကယ်တင်ရှင်ထံအပ်နှံခြင်းများကိုအကြီးအကျယ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကြုံတွေ့ရချိန်တွင်ဒေါက်တာအဟ်မဒ်သည်ယခုသူ့ဘဝကို his ၀ ံဂေလိတရားအားဝေငှခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းခရစ်တော်၏အသိပညာသို့ဆွဲဆောင်ခြင်းအားမိမိ၏ဘဝကိုမြှုပ်နှံလျက်ရှိသည်။ ။ ဤအရာသည်ဒေါက်တာအာမက်၏ဘဝ၏အရိပ်အမြွက်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်ဤစာအုပ်သည်သက်သေခံချက်ထက်မကပါ။ ၎င်းသည်မိုဟာမက်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုမိတ်ဆက်ပေးသောသင်တန်းလည်းဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည်ဂရပ်ဖစ်ပုံများတွင်ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်သူ၏ဘာသာပြောင်းဝင်လာပြီးနောက်ရက်စက်စွာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုခံရခြင်း၏အခက်အခဲများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Joktan သည်ယခုအချိန်တွင်မိမိ၏လူမျိုးအတွက်ရူပါရုံကိုမြင်တွေ့ရပြီးသောယေရှု၏ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ဖွယ်မျှော်လင့်ချက်နှင့်အသည်းအသန်နောက်လိုက်ဖြစ်သည်။ ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရုံသာမက၊ ဘုရားသခင်ဆီကရူပါရုံကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ချစ်လှစွာသောညီကိုအားပေးဖို့အရေးယူပါ။ ”
သမ္မတ Horizons အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ။ ယူအက်စ်အေ
“ အစ္စလာမ်အားထိတွေ့ခြင်း” ၏စာရေးဆရာ
Georg Houssney, Horizons အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
ဒေါက်တာ Ahmed Joktan ကဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်အကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။ သူသည်အစ္စလာမ်မဟုတ်သောစာဖတ်သူကိုနားလည်စေမည့်မျက်မှောက်ခေတ်ယုံကြည်ချက်များကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ထို့ပြင်သူ၏စာအုပ်သည်လူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်၏ကြင်နာမှုပြခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဆီသို့သူ၏ခရီးကိုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည် ခခမင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုလည်းပြောပြပါ။ ”
Host, Christ Fabry, Moody ရေဒီယိုမှာတိုက်ရိုက်
“ စစ်အခန်း - ဆုတောင်းခြင်းသည်စွမ်းအားကြီးမားသောလက်နက်” ရေးသားသူ
ခရစ် Fabry , ခရစ် Fabry
ဆော်ဒီအာရေဗျတွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သောဒေါက်တာ Ahmed Joktan ရေးသားထားသော“ မက္ကာမှခရစ်တော်သို့စာအုပ်” သည်သူ၏နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ပြောင်းလဲလာခြင်းနှင့်ဆော်ဒီနှင့်အခြား with ၀ ံဂေလိတို့အားအခြားသူများအားgဝံဂေလိတရားကိုဝေငှခြင်းကြောင့်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၏အတွေ့အကြုံများကိုသက်သေထူသည် ပင်လယ်ကွေ့inရိယာ၌အာရပ်။ ၎င်းသည်သူမအပေါ်ရက်စက်စွာပြုမူဆက်ဆံသော်လည်းသူ၏ပျောက်ဆုံးနေသောတိုင်းသူပြည်သားများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အောင်ပွဲ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်“ မက္ကာကိုခရစ်တော်၏ ၀ န်ကြီးဌာနများအတွက်” တည်ထောင်ခြင်းသည်မိမိလူမျိုးအပေါ်ထားရှိသောသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထင်ရှားစေသည်။ သူ၏စာအုပ်သည် ၀ န်ကြီးဌာနများ၌ပါ ၀ င်ရန်အသည်းအသန်ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။
—Dr ။ Don McCurry, Colorado Springs, Colorado
ဒေါက်တာဒွန် McCurry, ဒေါက်တာဒွန် McCurry
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင်အော့ကလန်ရှိအိပ်မက်တွင်ယေရှုနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်အစ္စလာမ်၏အခွင့်ထူးမှခရစ်တော်အားနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်းအထိထူးခြားသောခရီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤခေတ်သစ်တမန်တော်ပေါလုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ၏ဇာတ်လမ်းများကို ဦး စွာကြားခဲ့ပြီးအာမက်သည် 2010 ခုနှစ်တွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ဆင်းရဲဒုက္ခများအကြောင်းခံ့ညားပြောဆိုခြင်းထက်သူသည်ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္characterာန်နှင့်သူ၏ဘဝကိုမပြောင်းလဲဘဲသူ့ကိုယ်ပိုင်ဆော်ဒီလူများကို burden ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောရန်နှင့်အခြားသူများထံရောက်ရှိရန်တပ်ဆင်ရန်အထူးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ - သင်မဖြိုဖျက်ချင်ပါ။
—Rev Steve Jourdain၊ Palmerston North၊ နယူးဇီလန်
အကြီးတန်းဝန်ကြီး St Alban ၏ Presbyterian ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
Rev Steve Jourdain, အကြီးတန်းဝန်ကြီး St Alban ၏ Presbyterian ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
“ သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်ရပ်ဟာဒမတ်စကတ်လမ်းပေါ်မှာထမြောက်ပြီးတဲ့ခရစ်တော်နဲ့တာရှုမြို့သားရှောလုတို့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ Ahmed Joktan ၏အသွင်ပြောင်းပုံပြင်တွင်ထူးခြားသောမျဉ်းပြိုင်အချို့ရှိသည်။ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောခရစ်တော်နှင့်ရာမာန်ဒန်တွင်တစ်နှစ်တာအော့ကလန်ရှိဟိုတယ်အခန်းတစ်ခန်းမှပေါလုအားသခင်ယေရှု၏“ ငါ့အတွက်ကြောင့်သူသည်မည်မျှခံရမည်ကိုပြလိမ့်မည်” ဟူသောသခင်ယေရှု၏စကားမှသည်ဤစာအုပ်သည်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဖြင့်အာမက်၏ခရီးကိုခြေရာခံသည် မိသားစုနှင့်ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များနှစ်မျိုးစလုံးခံစားနေရသည်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့ ်၍ ဖတ်ရန်ကောင်းသည်။
—Murray Robertson, Christchurch, နယူးဇီလန်
ယခင်အကြီးတန်းသင်းအုပ်ဆရာ၊ Spreydon နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
Murray Robertson က, Spreydon နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း
“ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လာသည့်မွတ်စလင်များ၏ဖြစ်ရပ်သည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လှုပ်ရှားမှုကိုမှတ်သားဖော်ပြသောမြင့်မြတ်သော“ အံ့သြဖွယ်ရာများ” တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်။ အားလုံးအံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးမှာမက္ကာမြို့ရှိမူဖီ၏သား Ahmed Joktan ၏ထူးခြားသောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်သည်သူ၏မျှော်လင့်မထားသောပြောင်းလဲခြင်းနှင့်သူခံစားခဲ့ရသည့်ဆိုးဝါးသောဆင်းရဲဒုက္ခများကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်သခင်ဘုရား၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကျေးဇူးတော်နှင့်မွတ်စ်လင်မ်နောက်ခံဘာသာပြောင်းဝင်လာသူကိုရဲရင့်သောသက်သေခံခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌အစ္စလာမ်၏ဗဟိုနှင့်ဝေးကွာသောနေရာတွင်ဖြစ်သင့်သည်မှာဘုရားသခင့်အံ့အားသင့်စရာများထပ်မံဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ”
ရောဘူလ်၊ Palmerston North၊ နယူးဇီလန်
အငြိမ်းစားနယူးဇီလန် Presbyterian ၀ န်ကြီး၊ စာရေးဆရာနှင့်နယူးဇီလန်၏ Presbyterian ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကြီးကြပ်သူဟောင်း။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီ
movement ၀ ံဂေလိတရားကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးသောနေရာများတွင်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ (ရော ၁၅း၂၀) ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီခဲ့သည်။
ခရစ်တော်ထံသို့မက္ကာသည်အမြတ်အစွန်းအတွက်မဟုတ်သော ၅၀၁ (ဂ) (၃) ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသောအတိုင်းအတာအထိထည့်ဝင်မှုများသည်အခွန်နှုတ်ယူနိုင်သည်။
ဗီဇာ Mecca မှခွင့်ပြုခဲ့
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၂ ဘီလီယံမုစ်လင်မ်များ
ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၂၅% ခန့်ရှိသည်
ယူအက်စ်တွင် ၃.၅ သန်းမှမွတ်စ်လင်မ်
DEARBORN, Michigan IN 100,000
တပည့်သင်ခန်းစာများ (6) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-06-15T14:16:26+00:00
တပည့်သင်ခန်းစာများ (5) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-06-15T15:01:12+00:00
တပည့်သင်ခန်းစာများ (4) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-06-15T14:25:52+00:00
တပည့်သင်ခန်းစာများ (3) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-05-25T13:44:39+00:00
တပည့်သင်ခန်းစာများ (2) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-05-14T00:22:24+00:00
ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံ (3) اساسياتالايمانWendy သညျယရှေု2021-05-12T21:25:01+00:00
ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံ (2) اساسياتالايمانWendy သညျယရှေု2021-05-19T22:47:29+00:00
ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံ (1) اساسياتالايمانWendy သညျယရှေု2021-05-19T22:03:18+00:00
တပည့်သင်ခန်းစာများ (1) دروسفيالتلمذةWendy သညျယရှေု2021-05-13T20:38:38+00:00
Albisharah (1) البشارةWendy သညျယရှေု2021-05-13T20:42:30+00:00
မက္ကာခရစ်တော်စာအုပ်Dr. Ahmed Joktan2020-04-01T20:13:58+00:00
Moody ရေဒီယိုအင်တာဗျူးDr. Ahmed Joktan2021-04-04T02:49:50+00:00
ဘယ်တော့မျှအရှုံးမပေးပါ! တရားဒေသနာDr. Ahmed Joktan2020-04-01T20:06:56+00:00
Wenatchee, WA 98807 ယူအက်စ်အေ
ခရစ်တော်ထံသို့မက္ကာသည်အမြတ်အစွန်းအတွက်မဟုတ်သော ၅၀၁ (ဂ) (၃) ဖြစ်သည်။ အလှူငွေများကိုဥပဒေအရခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းအတာအထိအခွန်နှုတ်ယူနိုင်သည်။ © COPYRIGHT မက္ကာသည်ခရစ်တော် ၀ န်ကြီးဌာနများအတွက် ၂၀၁၅ - |
Facebook ကYouTube ကိုတွစ်တာInstagram ကိုPayPal က